Home News Maxamed C. Gaanbe oo wakiil ka ah RW Kheyre ayaa la kulmay...
Maxamed C. Gaanbe oo wakiil ka ah RW Kheyre ayaa la kulmay Saraakiil Imaaraati ah! Maxay ka wada hadleen?
Ganacsade Maxamed Cabdikarin oo loo yaaqo Gaanbe kana mida milkiilayaasha Hotelka Jazeera ee ku yaala magaalada Muqadishu ayaa waxa uu la kulmay Sarakiil ka socdo dowlada Imaaraadka. Kulankan ayaa ka dhacay Hotel DusitD2 ee ku yaala magaalada Nayroobi. Maxamed Gaanbe ayaa la ah Ra’isal Wasaare Kheyre ilma adeer, wuxuuna gancsi kala duwan kula jiraa RW Kheye. Waa ganasadihii uu ku wareejiyay saamihii uu ku lahaa shirkada SOMA OIL, sidoo kale waxa uu hada ganacanta ku hayaa heshiiyo ganacsi oo lala galay shirkado ka socda dalka Raashiyaan ah.
Gaanbe oo wakiil ka ah Ra’isal Wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa kulan qarsoodi ah kula qaatay magaalada Nayroobi uu haatan ku sugan yahay saraakiil ka socoto dowlada Imaaraadka. Shirkaan oo aad looga taxadar in aan la ogaan isla markaana laga qariyay xukuumada iyo Madaxweyne Farmaajo ayaa ujeedadiisu ahayd in Imaaradka taageero buuxda siiyaan RW Kheyre si MD Farmaajo loo galiyo go’doon siyaasadeed. Sadax asbuuc ka hor ayaa ahayd markii uu Ganacasade Gaanbe uu safar ku tagay Magaalada Abu Dhabi isaga oo wakiil ka ah RW Kheyre.
Waxaa muuqata in RW Kheyre sameeystay Wasaarad Arimo Dibadeed oo ka baxsan tii sharciga ahayd. Waxaana uuna waqtigiisa badan galiyaa siduu uu lacag u uruursan lahaa. Qormooyinka danbe ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa kulankaas iyo wixii ka soo baxay.
Previous articleRW Kheyre oo ka codsaday Safiirka Itoobiya in uu warbaahinta ka difaaco!
Next articleXildh. Mahad Salad: Damiir xishooda hadii aadan lahayn sameey wixii aad rabto!
Qarax aad u xoog badan oo goor dhaw ka dhacay agagaarka...